रामबहादुर थापाविरुद्ध कांग्रेसले दियो उजुरी, पाउलान् त राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार बन्न ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more रामबहादुर थापाविरुद्ध कांग्रेसले दियो उजुरी, पाउलान् त राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार बन्न ?
रामबहादुर थापाविरुद्ध कांग्रेसले दियो उजुरी, पाउलान् त राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार बन्न ?
माघ १३ गते, २०७४ - ११:१३
पोखरा । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका नेता रामबहादुर थापाविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
अपांग कोटाबाट उम्मेदवारी दिएका थापाविरुद्ध उनीसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रकाश पन्थले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरीमा थापाको अपांगता परिचयपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उम्मेदवारी बदरको माग मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
०५७ मा लिएको अपांगता परिचयपत्र थापाले पेस गरेका छन् । पछिल्लो निर्देशिका अनुसारको नयाँ कार्ड चाहिने भन्दै पुरानोको मान्यता नहुने दाबी उजुरीमा गरिएको छ । थापाले भने पुरानै परिचयपत्रका आधारमा राज्यका सुविधा पाएको भन्दै नयाँ निर्देशिका अनुसार नयाँ कार्डका लागि प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
उजुरीका बारेमा शनिबार निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्णय गर्ने बताइएको छ ।
माघ १३ गते, २०७४ - ११:१३ मा प्रकाशित